एनिमा एक्लै प्रार्थना एक व्यक्ति आउन को लागी [+]?
एक व्यक्तिको आगमनको लागि आत्मालाई एक्लै प्रार्थना गर्नुहोस् यो त्यस्तो गोप्य हतियार बन्न सक्छ जसले हामीलाई ती क्षणहरूमा मद्दत गर्दछ जहाँ अरू कसैले गर्न सक्दैन।
ती क्षणहरुमा जुन हामीले आफ्नो सम्पूर्ण आत्माको साथ त्यो व्यक्तिलाई हेर्न चाहान्छौं तर हामीलाई थाहा छैन कि के गर्ने वा के गर्ने भनेर उनी आफै निर्णय गरी कि उनी हामीलाई भेट्न आउँदछन्, यो प्रार्थना हो जुन त्यस क्षणमा हामीलाई उपयोगी हुन सक्छ।
1 एक जना मानिसलाई आउनको लागि एक्लै आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस् यो के हो?
1.1 एक व्यक्तिको आगमनको लागि आत्मालाई एक्लै प्रार्थना गर्नुहोस्
एक जना मानिसलाई आउनको लागि एक्लै आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस् यो के हो?
यो व्यक्ति बनाउन धेरै सेवा गर्दछ हामीलाई भेट्नुहोस् उहाँलाई हामीसँग कुराकानी गर्ने बनाउन।
हामीलाई हेर्नको लागि त्यस व्यक्तिमा सिर्जना गरिएको आवश्यकता बढ्दै गएको छ हामीलाई भेट्न आउँदा अपरिहार्य छ।
एक शक्तिशाली उपकरण जुन हामी विश्वासको साथ हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं कुनै पनि समयमा, चाहे यो दिनदिनै पनी हैन।
अनिमा सोला, मेरो धन्य संत, म तपाईलाई ठूलो विश्वासका साथ यो व्यक्ति बनाउन बिन्ती गर्दछ ...
(व्यक्तिको पूरा नाम)
म मेरो काखमा फर्कें, जुन आज देखि मलाई लाग्छ कि हामी अझै पनि प्रेमको बन्धनमा बाँधिएका छौं, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईंको ठूलो शक्ति मतिर फर्कनुहोस् र मेरो पक्षबाट कुनै कुराले तपाईंलाई हटाउँदैन, कि तपाईंले मलाई आत्मा, शरीर र आत्मामा प्रेम गरिरहनुभयो। , अब र सदाको लागि।
म तपाईलाई यो प्रार्थनामा आत्मामा एक्लै बिन्ती गर्दछु कि एक व्यक्तिको लागि आउन, अनिमा एक्लो, मलाई तपाईको सहयोग दिनुहोस्।
म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, मेरो सम्पूर्ण विश्वासको साथ, अनिमा एक्लो, तपाईको चमत्कारी उपहारका साथ, जुन म धेरै प्रेम गर्दछु मेरो छेउमा फर्किन्छ, प्रेम र समझले भरिएको हृदयको साथ।
एक्लै हौसला मिल्नुहोस्, म यो प्रार्थना तपाईंलाई पवित्र गर्दछु, जुन मबाट टाढा भएको छ, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई नबिर्सनुहोस्, जुन म सधैं तपाईंको दिमागमा छु।
र म तपाईंलाई वाचा गर्छु कि यो व्यक्ति फर्किने बित्तिकै,, म तपाईंको लागि निम्न कार्य गर्दछु, _धन्यवाद
याद गर्नुहोस् कि यस प्रार्थना गर्नको लागि कुनै खास वातावरण, दिन वा अवस्था छैन।
यो कुनै पनि समय वा स्थानमा गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँ मैनबत्ती बत्ती बाल्न चाहानुहुन्छ वा प्रार्थना गर्नु भन्दा अलि बढी वातावरण गर्न चाहानुहुन्छ, यो ठीक छ, तर त्यसले प्रार्थनालाई कम वा अधिक शक्तिशाली बनाउँदैन।
विशेष अवस्थामा त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ त्यहाँ हराइरहेको वा अपहरण गरिएको परिवारको सदस्य छ र केही घरपालुवा जनावरलाई पनि लागू हुन्छ।
यस प्रार्थनाको शक्ति र प्रभावकारिता अचम्मको छ चाहे आश्चर्यकर्म कत्ति गाह्रो छ।
हामीले हरेक दिन प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामीले प्रार्थनाहरूमा विश्वास गर्नुपर्दछ र विश्वास गर्नुपर्दछ।
यदि हामीमा विश्वास छैन भने हामी ख्याल राख्दैनौं।
तपाईलाई लाग्छ यो राम्रोसँग चल्नेछ। कि कसैले तपाइँ सुन्नेछ र तपाइँको अनुरोध मा सहयोग।
विश्वास र सामर्थ्यको साथ दिनको एक पटक मात्र प्रार्थना गर्नुहोस्। छोटो समयमा तपाईंको अर्डरको ख्याल राखिन्छ र तपाईं खुसी हुनुहुनेछ।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, एक सेतो मोमबत्ती वा रातो मैनबत्तीलाई धन्यवाद दिनुहोस्।
मैनबत्तीहरू सेवा दिन्छन् प्रस्ताव हाम्रो अर्डरहरूमा मद्दत गर्ने संस्थाहरूलाई।
यो एक साधारण कुरा हो, तर धेरै प्रभावी।
संसार आध्यात्मिक एक वास्तविकता हो जुन हामी वरिपरि छौँ र हामी यसलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहँदैनौं भन्ने तथ्य यसको अस्तित्व छैन भन्ने होइन, त्यसैले ती आध्यात्मिक औजारहरूलाई आफ्नो बनाउने बृद्धि भइरहेको छ।
को प्रार्थनाहरू आत्माबाट बनेको विशेष शक्तिको साथ आउँदछ किनकि कुनै आत्मिक प्राणीसँग कुरा गर्दा ईमानदारीको जस्तो कुनै कुरा छैन।
त्यो एक हो जीवनमा बनेका सबै प्रार्थनाहरू पूरा गर्ने नियमजोसुकै पनि, तिनीहरू जहिले पनि विश्वासका साथ गरिनु पर्छ किनकि प्रार्थनाको उत्तर पाउनेछ भन्ने कुराको मात्र आवश्यकता छ।
विश्वासको साथ आउन एक मात्र आत्माको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। सबै ठिक हुन्छ।